Frequently asked questions for employees (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions for employees (isiXhosa)
Zeziphi ezona zinto zibalulekileyo endinokuzenza, ukuqinisekisa ukuba andisulelwa yintsholongwane okanye andibasuleli oogxa bam emsebenzini okanye abantu endihlala nabo ekhaya?
Sebenzela ekhaya ukuba unako okanye xa ungaziva mnandi
Gcina umgama oyi 1,5 yeemitha phakathi kwakho nabanye ngawo onke amaxesha.
Hlamba izandla zakho okanye ufake isanithayiza rhoqo
Landela iinkqubo zococeko ezizizo
Nxiba imaski yobuso okanye into yokugquma xa uphakathi kwabantu
Yenza zonke ezi zinto zikhankanywe ngasentla kwindawo osebenza kuyo nakwiindawo oba kunye nabanye abantu ngexesha lebreyikhi, indawo ezifana neenkanti neendawo ekutshayelwa kuzo.
Ngaba bafanele babe semsebenzini abasebenzi abasesichengeni?
"umsebenzi osesichengeni" uthetha nawuphi na umsebenzi (a) onemiba yezempilo eyaziwayo okanye echaziweyo okanye nayo nayiphi na eyenye imeko enokumbeka umsebenzi emngciphekweni omkhulu wokufumana ubunzima okanye ukusweleka kunabanye abasebenzi ukuba wosulelwe yiCOVI D -19 (umz. isifo sentliziyo, isifo seswekile, isifo sokuphefumla esingapheliyo kunye nomhlaza); okanye (b) ongaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala osemngciphekweni omkhulu wobunzima okanye ukusweleka ukuba wosulelekile.
Amashishini kufuneka athathe amanyathelo akhethekileyo ukunciphisa umngcipheko weCOVID -19 kubasebenzi abasesichengeni. Amashishini makachonge bonke abasebenzi abasesichengeni kwaye bakhuthazwe, apho kunokwenzeka khona, ukuvumela abasebenzi abasesichengeni ukuba basebenzele ekhaya (nanjengendawo yokuqala yokunciphisa inani labasebenzi abaninzi ngexesha elinye kwindawo yokusebenzela), batshintshe uhlobo lomsebenzi wabo, bayishiye yodwa indawo abasebenzela kuyo okanye babekwe kwikhefu elikhethekileyo elihlawulelwayo ukuba azifumaneki ezinye iindlela.
Ngaba kufuneka ndinxibe imaski ngalo lonke ixesha ndisemsebenzini?
Ewe, imaski yobuso okanye into yokugquma kufuneka inxitywe ngalo onke ixesha emsebenzini ngaphandle kokuba uza kutya okanye uza kusela.
Iimaski kufuneka zikhululwe ngokukhuselekileyo zibanjwe ngemitya/ ngemitya ye-elastikhi zize zigcinwe kwizinto zazo zokuphatha xa zingasetyenziswa.
Ingaba iikhastoma okanye umhambisi mpahla kufuneka anxibe iimaski zobuso naye?
Ewe, wonke umntu okwindawo yokusebenzela, kuqukwa neekhastoma kunye neeklayenti, kufuneka zinxibe imaski yobuso okanye nayiphi na enye into efanelekileyo yokugquma impumlo nomlomo xa ephakathi kwabantu.
Ukuba andifuni ukunxiba imaski, ingaba umqeshi angandinika?
Ewe, ngokomthetho wonke umqeshi kufuneka anike wonke umsebenzi imaski ngaphandle kwentlawulo, iimaski zibe mbini ezenziwe ngelaphu ngendlela emiselweyo ngokwezikhokelo ezikhutshwe liSebe lezoRhwebo, iMveliso noKhuphiswano, ukuze umsebenzi ayinxibe ngexesha asemsebenzini naxa esendleleni evela emsebenzini. Ngaphezu koko, umqeshi wakho kufuneka aqinisekise ukuba abasebenzi bayanikwa ulwazi, banikwe nemiyalelo bafumane noqeqesho ngendlela yokusebenzisa iimaski ngokuchanekileyo.
Ingaba umqeshi kufuneka akunike isanithayiza?
Ewe, umqeshi kufuneka, athi ngaphandle kwentlawulo aqinisekise ukuba kukho iisanithayiza zesandla ezaneleyo kwiindawo ezizezemfuno eziphambili kwiindawo zokusebenzela, umzekelo kwiindawo ekungenwa kuzo, iinkanti, nezindlu zangasese, zililingane inani labasebenzi okanye abantu abasemsebenzini. Abasebenzi kufuneka baqinisekise ukuba iisanithayiza zihlala zikhona yaye zilungele ukusetyenziswa. Oku akuthethi ukuba umqeshi kufuneka avele anike umsebenzi ngamnye isanithayiza yezandla nje.
Ngabasebenzi abangasebenzeli kwiindawo zabo zokusebenza ezisemisebenzini ingengabo abasebenzela ekhaya kuphela ekufuneka bafumane isanithayiza yezandla ngaphandle kwentlawulo, kodwa ngabo basebenza phakathi koluntu abaya kufumana isanithayiza yezandla eyaneleyo.
Abasebenzi kulindeleke ukuba bazihlambe izandla zabo bazifake isanithayiza yezandla rhoqo emva kwexeshana ngakumbi xa bebekhe basondelelana nabanye abantu okanye emva kokuba bebekhe baphatha iindawo ezifikelelwa zizandla/ okanye ebezifikelelwe zizandla zabanye abantu.
Ngawaphi amanyathelo okucoca ekufuneka umqeshi wam awalandele ukuthintela ukunwenwa kweCovid -19 emsebenzini?
Wonke umqeshi kufuneka aqinisekise ukuba zonke iindawo eziyimiphezulu yezinto nezixhobo zifakwa izibulali ntsholongwane ngaphambi kokuba kuqaliswe ngomsebenzi, oku kwenziwe rhoqo ngeli xesha kusetyenzwayo nasemva kokuba kugqityiwe ukusetyenzwa. Zonke iindawo ezisetyenziswa kakhulu njengezindlu zangasese, iindawo ekubuthwa kuzo, izibambo zamacango nezixhobo ze-elektroniki ekubolekiswanayo ngazo kufuneka nazo zicocwe rhoqo zifakwe nesibulali ntsholongwane.
Isistim yebhayometrikhi kufuneka ingasetyenziswa okanye isetyenziswe ngendlela engazukwenza ibe nokufikelelwa sisandla. Kufuneka yenziwe ibe ngummiselo kubasebenzi into yokuba kufuneka bacoce bafake isibulali ntsholongwane kwiindawo zabo zokusebenza, kuba abacoci abanokwazi ukwenza umsebenzi owongezelelekileyo wokucoca / wokufaka isibulali ntsholongwane ekufuneka wenziwe rhoqo.
Ingaba ungakanani umlinganiselo omiselweyo ukunqanda ukunwenwa kweCovid-19 emsebenzini?
Umqeshi wakho kufuneka ayiphathe indawo yokusebenzela ngendlela efanelekileyo ngokommiselo ukuqinisekisa ukuba abasebenzi abasondelelani, kangangoko kungenzeka, ukuqinisekisa ukuba ukhona umgama oyi1,5 yeemitha phakathi kwabasebenzi abasemsebenzini.
Ngeli xesha inani labantu abasebenzini (kuqukwa nabasebenzi kunye neekhastoma) kungacaciswanga kwimimiselo yesizwe, iSebe lezeMpilo leNtshona Koloni lona liphakamise ukuba malibe lincinane inani labasebenzi elibakho kwiindawo zokusebenzela ukuze umntu omnye abe nendawo eyi 6 m2 (oko kukuthi ubukhulu bomgangatho bahlulwa ngo 6).
Licebiso elinokusetyenziswa elo ukuze kukwazeke ukugcina umgama ofanelekileyo nokhuselekileyo phakathi kwabantu, ukunciphisa inani labasebenzi abakhoyo emsebenzini ngalo naliphi na ixesha, umzekelo, ukwenza abasebenzi bonke abanokukwazi ukusebenzela ekhaya benze oko, batshintshane abasebenzi ngeeshifti zokusebenza, ngezinye iintsuku, iiyure zokusebenza zingafani namaxesha eti angafani kunye neebreyikhi zeti ndawonye/okanye nokunciphisa ukuba umsebenzi abe semsebenzini kwindawo asebenzela kuyo. Abasebenzi kufuneka bangaxhawulani/bulisani ngezandla, bangagonani/bangongani, bangabulisani ngamanqindi, okanye ngeengqiniba yaye kufuneka bawugcine kangangoko umgama phakathi kwabo nabanye abasebenzi neekhastoma.
Kuya kwenzeka ntoni xa umqeshi wam ethe akakwazi ukwenza lungabikho usondelelwano ngokommiselo?
Umqeshi wakho kufuneka enze amalungiselelo okuba kubekho izahluli-desika kwiindawo zokusebenzela ukwahlula abasebenzi kwindawo abahlala basebenzele kuyo xa bengakwazi ukubahlulahlula abasebenzi ngomgama oyi1,5 yeemitha.
Qaphela ukuba umyalelo ovela kwiSebe lezaBasebenzi awuthethi nto ngeendawo ezithile zabasebenzi ezifana nakwiinkonzo zonyango nezononophelompilo.
Ngokwemimiselo ebekwe nguRhulumente wezeMpilo weNtshona Koloni, apho abasebenzi kunokwenzeka khona, akufuneki basenzise indawo enye yokusebenzela okanye bangasebenzisi sixhobo sinye sokusebenza.
Ukuba iindawo zokusebenzela nezixhobo kufuneka kubolekisenwe okanye zisetyenziswe ngabantu ngabantu, kufuneka zicocwe xa kutshintsha ishifti. Abaqeshi kufuneka babathintele kangangoko banako abasebenzi bangasondelelani nabanye, ngokubagcina besebenza bengamaqelana amancinci bangamane betshintshatshintsha abasebenzi ngokwamaqela.
Yintoni umahluko phakathi kokuzihlalela uzikhethe wedwa nokukhwarantinwa?
Ukuhlala uzikhethe wedwa kulungele abo sele begula kakhulu kunye/okanye abafunyaniswe beneCovid-19, kodwa kungekho mfuneko yokuba baye kulaliswa esibhedlele ukuze bafumane unyango.
Ukukhwarantinwa kulungele abantu okanye amaqela abesesichengeni seCovid-19 ngenxa yokusondelelana nabantu abasuleleke yiCovid-19, ze ke ngoko babe nokusulelwa nabo yiCovid-19. Ukukhwarantina kugcina abantu bangasondelelani nabanye, ukuze bangosuleli abanye bengazi ukuba basulelekile. Abanye abantu abakhwarantiniweyo baye bosuleleke ngeli xesha abanye bengosuleleki. Ukukhwarantina kuthatha iintsuku ezilishumi (10).
Yintoni umahluko phakathi kokuskrina nokuvavanya/ukuhlola?
Ukuskrina kwenziwa kwiphephambuzo ukuze kubonwe ukuba umntu unazo na iimpawu kujongwe namaqondo obushushu bakhe. Abantu abathe “bafunyaniswa benayo xa beskrinwa” oko kukuthi babonakalisa iimpawu zeCovid-19, basenokuba bosulelekile. Baya kuhlolelwa iCovid-19 baze bacelwe ukuba baqhubeke nomsebenzi wabo. Iimvavanyo ziimvavanyo ezenziwa elebhu ukukhangela ukuba umntu unayo na iCovid-19.
Ukuba kuthe kwafumaniseka uneCovid-19 uya kucelwa ukuba uzihlalele wedwa ukunqanda ukusulela abanye.
Ngawaphi amanyathelo okuskrina ekufuneka umqeshi awamilisele kwindawo yokusebenza?
Wonke umqeshi kufuneka athathe amanyathelo okuskrina nakowuphi na umsebenzi ngexesha befika emsebenzini, ukukhangela ukuba akanazimpawu azibonakalisayo na umsebenzi ezayamene neCovid-19, ezifana nefiva, ukukhohlela, umqala obuhlungu, okanye ukuphefumla nzima.
Nawuphi na umsebenzi onezi mpawu kufuneka angavunyelwa ukuba abe semsebenzini. Kufuneka banikwe imaski yezonyango okanye anikwe imaski yelaphu, ahlambe izandla zakhe asiwe kwiziko lokuvavanya iCovid- 19.
Abasebenzi mabakhunjuzwe ukuba bangayi emsebenzini xa bebonakalisa iimpawu zeCovid-19, yaye kufuneka baziswe abaphathi babo ngale meko. Ukuba bekukhe kwakho umsebenzi ochaphazelekileyo yile meko emsebenzini kwixa elingaphambili, abe loo msebenzi uye wasondelelana nomnye kufuneka nalowo aye kwenziwa iimvavanyo.
Ukuba kwenzekile umsebenzi angaziva mnandi, bangenziwa iimvavanyo kwakhona ukukhangela ukuba ziyalawuleka na iimpawu zeCovid-19.
Kuye kwenzeka ntoni xa ugxa wam eneempawu zentsholongwane icorona?
Umqeshi kufuneka angamvumeli nawuphi na umsebenzi ukuba angene kwindawo yokusebenza okanye angayi kwasemsebenzini. Ukuba umsebenzi sel’esemsebenzini, umqeshi kufuneka aqinisekise ukuba umsebenzi uzikhetha azihlalele yedwa, anikwe imaski yezonyango, enze amalungiselelo nomqeshi wakhe ukuba ahanjiswe ngendlela engayi kubeka abanye abasebenzi okanye abantu ngokubanzi esichengeni, usengazikhwarantina ngokwakhe okanye aye kuxilongwa okanye enziwe iimvavanyo zonyango.
Ngeli xesha umsebenzi esalindele iziphumo kufuneka abe usazikhwarantinile. Umqeshi akanyanzelekanga ukuba avavanye wonke umntu emsebenzini, kodwa xa ethe umsebenzi wafunyaniswa enecovid-19, umqeshi kufuneka akhangele abantu abesondelelene nabo asenokubathumela bavavanywe okanye bazikhwarantine ngokuxhomekeke ekubeni banazo na iimpawu nokuba abanazo.
Ingaba kufuneka umqeshi ahlawulele iindleko zovavanyo?
Akanyanzelekanga umqeshi ukuba ahlawule naziphi na iindleko zonyango lwabucala okanye olukarhulumente ezithe zakho.
Ingaba kuya kuvalwa emsebenzini xa ethe wafunyaniswa enentshongwane icorona umsebenzi?
Akunakuvele kuvalwe zisuka. Ukuvalwa komsebenzi kuxhomekeka kwinani labasebenzi abafunyaniswe besulelekile, ukuba sesichengeni kwabanye abasebenzi ngenxa yemeko yaba basebenzi kwanendawo leyo ichaphazelekileyo emsebenzini.
Ukuba kufumaniseke ukuba ikho iCovid-19 emsebenzini, umqeshi uya kuthi ngokukhawuleza azise iSebe lezeMpilo leNtshona Koloni neSebe leNgqesho nezaBasebenzi. Ngawo aya kwenza isigqibo sokuba kufanelekile ukuba kuvalwe na emsebenzini. Nokuba bathe abasemagunyeni babona kufanelekile ukuba kuvalwe ukusebenza, kuya kuthi ngokuxhomekeke kwiimeko zomsebenzi, kuvalwe – izigqibo ezinjalo ngumsebenzi oya kuzikhethela, akukho mfuneko yamvume evela komnye umntu malunga nokuba kuvulwe kusetyenzwe phantsi kweemeko ezinjalo.
Ingaba kufuneka imvume evela kurhulumente yokuba kuvalwe emsebenzini?
Ukuba kuthe kwavalwa emsebenzini ngenza yokuba kukho umsebenzi ofunyaniswe esulelekile, kufuneka kwaqinisekiswe ukuba onke amanyathelo ayalandelwa aze athotyelwe nemimiselo nezikhokelo ngokubhekiselele ekucocweni ngesibulali ntsholongwane kwendawo yokusebenzela. Kuya kuphinda kuvulwe ngaphandle kwemvume esesikweni evela kurhulumente.
Ukuba ukusebenza kuvalwe liSebe leNgqesho nezaBasebenzi, kuya kulindwa imvume evela kwiSebe leNgqesho nezaBasebenzi lokuba kuvulwe.
Ingaba yonke indawo emsebenzini kufuneka icocisiwe okanye ifakwe isitshabalalisi ntsholongwane yinkampani esemthethweni yokucoca?
Hayi. Ukuba umsebenzi uye wafunyaniswa esulelekile, zonke iindawo apho asebenza khona umsebenzi lowo okanye abekhe wahambela kuzo apha emsebenzini kufuneka zicocwe ngokupheleleyo ngesepha namanzi, zisulwe ngomxube weblitshi (umxube oyi 30ml weblitshi kwilitha nganye yamanzi ukuze ube ngumxube oyi 0.1%). Ukuba indawo leyo ayinako ukucocwa ngesepha nangamanzi kufuneka ke isulisiswe kakuhle ngomxube weblitshi, okanye ngomxube wesitshizi esine-alkhoholi engu-70%.
Indawo eza kucocwa iya kucocwa ngokwemeko yendawo nganye kuqukwa phakathi kwezinye izinto, ikhitshi, igumbi labasebenzi, inkanti, amagumbi angasese, iitroli, iibhaskithi, iindawo zokubamba zamacango, iindawo zokusebenzela, iikhompyutha neekhawuntala. Ukuba indawo leyo inkulu yaye inezinto ezininzi ezifuna ukucocwa nokufakwa isibulali ntsholongwane, kufuneka ivalwe indawo yokusebenzela ixeshana ngeli thuba kusenziwa oku. Ukucocisiswa kwendawo akulindelekanga ukuba kwenziwe yinkampani esesikweni yokucoca.
Ukuba umsebenzi uye wafunyaniswa eneCovid-19, ingaba kufuneka bahlolwe bonke abanye abasebenzi abakhoyo emsebenzini?
Ukuba umsebenzi ufunyaniswe esulelekile, bonke abanye abasebenzi abachaphazelakayo emsebenzini kufuneka bahlolwe ngokwenqanaba lokubasesichengeni kwabo kusuleleko lwentsholongwane nokuba kufuneka bakhwarantinwe na okanye hayi.
Ukuba umsebenzi ubesondelelene nabantu abachaphazelekileyo (ngomgama ongaphantsi kwe-1m imizuzu engaphezu kwelishumi elinesihlanu -15) nomsebenzi osulelekileyo, nobonakalisa iimpawu zeCovid-19, kufuneka avavanywe. Ukuba umsebenzi ebesondelelene nomsebenzi osulelekileyo yaye engenazi-PPE zaneleyo, kodwa abe engenazimpawu zeCovid-19, kufuneka bakhululwe bagoduke baye kuzikhwarantina iintsuku ezilishumi (10) ukususela kumhla wokugqibela wokuba bebesondelelene nomntu osulelekileyo kanti xa beqalisa ukubonakalisa iimpawu, kufuneka benziwe uvavanyo.
Ukuba umsebenzi wayekhe wasondelelana nomnye umsebenzi osulelekileyo kodwa wabe enxibe i-PPE yaye engenazo neempawu zeCovid-19 okanye xa umsebenzi engenazo iimpawu zeCovid-19, baya kuqhubeka besebenza, kodwa kufuneka bazigade iintsuku ezilishumi (10). Ukuba baba beempawu zeCovid-19 kufuneka ijongwe imeko yabo ngendlela eyiyo.
Ukuba iqela labasebenzi liye lafunyaniswa lisulelekile, bonke abasebenzi baloo shifti ebekuyo kufuneka bazikhwarantine baze bazigade iimpawu zeCovid-19.
Ukuba umsebenzi ufunyaniswe esulelekile, unako na ukubuyela emsebenzini xa ethe wavavanywa waza akabinayo intsholongwane?
Ukuba umsebenzi ufunyaniswe esulelekile, akukho mfuneko yokuba bade bavavanyelwe ukukhangela ukuba abasenayo nayo intsholongwane ngaphambi kokuba babuyele emsebenzini. Endaweni yoko umsebenzi kufuneka abuyele emsebenzini ngokuxhomekeke koku kulandelayo:
Izigulane ezingabonakalisi zimpawu zeCovid-19: loo msebenzi ubuyela emsebenzi emva kweentsuku ezilishumi (10) emva kokuba ebefunyaniswe esuleleke yiCovid-19
Isigulane esineempawu ezingekho qatha zesifo iCovid-19: loo msebenzi uya kubuyela emsebenzini emva kweentsuku ezilishumi (10) emva kokuba ebeneempawu zeCocid 19.
Isigulane esineempawu eziqatha zesifo iCovid-19: ubuyela emsebenzini emva kweentsuku ezilishumi (loo msebenzi uya kubuyela emsebenzini emva kweentsuku ezilishumi (10) yakuba sele imeko yakhe ingcono izinzile ngokwezonyango. Loo mhla uya kuwuchazelwa ngabasebenzi esibhedlele.
Ukuba isigulane sasithunyelwe ukuba siye kwenziwa iimvavanyo size silindele iziphumo zaso ngeli xesha sikwikhwarantini, ukuba zibuye zisithi akubonwa nto: angabuyela emsebenzini umntu emva kokufumana iziphumo ezichaza ukuba akanayo iCovid-19.
Abantu abachaphazelekileyo abakwikhwarantini: babuyela emsebenzini emva kweentsuku ezilishumi (10) bengadibani namntu.
Ingaba umsebenzi uselungelweni lokufumana ikhefu lengulo okanye xe eneempawu ezinxulumene neCovid-19?
Ewe. Ukuba uyagula okanye uneempawu ezinxulumene neCovid-19 kufuneka wazise umqeshi wakho, uzikhwarantine ungayi emsebenzini. Uya kuba selungelweni lokuthatha ikhefu elihlawulelwayo ngokuka-section 22 womthetho iBasic Conditions of Employment Act.
Kuya kwenzeka ntoni ukuba seziphelile iintsuku zam zekhefu lengulo?
Ukuba seziphelile iintsuku zakho zekhefu lengulo, umqeshi wakho kufuneka akwenzele isicelo sokuba ufumane iintsuku zokugula ngokwegatya-sihlomelo 4 loMyalelo owakhutshwa ngomhla wama-25 kuMatshi 2020 malunga neCOVID-19 Temporary Employer Relief Scheme phantsi kommiselo 10(8) weMimiselo eyabhengezwa ngokuka-section 27(2) womthetho iDisaster Management Act.
Ingaba umqeshi wam kuvumelekile ukuba axelele abanye abantu ukuba umsebenzi ufunyaniswe eneCovid-19?
Ewe. Umqeshi wakho kufuneka alazise iSebe lezeMpilo (atsalele ihotline yeCovid -19 engu 0800 02 9999) neSebe leNgqesho nezaBasebenzi
Ingaba abasebenzi bavumelekile ukuba bacalulwe ngenxa yokufunyaniswa beneCovid-19?
Hayi. Abaqeshi kufuneka baqinisekise ukuba abasebenzi abacalulwa xa bethe bafunyaniswa beneCovid-19 ngokwemimiselo ka-section 6 we-Employment Equity Act,1998.
Kuyakwenzeka ntoni ukuba uthe umsebenzi wasuleleka yiCovid-19 emsebenzini?
Ukuba ngaba bukhona ubungqina bokuba umsebenzi uye wasuleleka yiCovid-19 ngenxa yokuba sesichengeni emsebenzini, umqeshi kufuneka afake ibango lembuyekezo ngokwemimiselo yomthethio iCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act,1993.
Ukongeza koku imiqathango yokuba abasebenzi abaphantsi kwe-OHSA, ithi wonke umsebenzi unoxanduva lokuthobela imimiselo emiselwe ngumqeshi njengoko kuchaziwe ngokoMyalelo: COVID-19 Occuopational Health and Safety Measures in Workplaces, 2020 (Eyakhutshwa liSebe leNgqesho nezaBasebenzi ngomhla wama-29 kuEpreli 2020).
Ingaba ikhona na imeko apho ungemkhulwanga umgcipheko khona?
Zonke iindawo zokusebenzela zisemngciphekweni, kuqukwa nemisebenzi esezibhedlele apho kukho imimiselo eqatha yezempilo nokhuseleko. Abasebenzi bangenza eyabo indima ebalulekileyo ekulawuleni izinto eziyimingcipheko emisebenzini ngokwenza oku:
Ukugcina umgama oyi 1,5 yeemitha phakathi kwakho nabanye ngawo onke amaxesha
Ukuhlamba izandla okanye ukufake isanithayiza rhoqo
Ukulandela iinkqubo zococeko ezizizo
Ukunxiba imaski yobuso okanye into yokugquma xa uphakathi kwabantu
Ukwenza zonke ezi zinto zikhankanywe ngasentla kwindawo osebenza kuyo nakwiindawo oba kunye nabanye abantu ngexesha lebreyikhi, indawo ezifana neenkanti neendawo ekutshayelwa kuzo
Ukuba ndiye ndafunyaniswa ndinayo icorona, ze emva kweentsuku elilishumi (10), kubekho umntu ofunyaniswa enecorona, ingaba ndivumelekile ukubuyela emsebenzini?
Ukungabikho kweenkcukacha (data) ezaneleyo kwihlabathi lonke eziqinisekisa ukuba umntu obekhe wanayo intsholongwane iCOVID -19 akayi kuphinda abe nayo na kwakhona.
Ngoko ke, kwimeko apho imeko yakho inomngcipheko ophezulu njengokuba usondelelane nomntu ongayinxibi ngalo lonke ixesha imaski, kulindeleke ukuba uzikhwarantine iintsuku ezilishumi (10) ukususela ngaloo mhla wayefunyaniswe ngawo enayo umntu lowo.
Ukuba ubukhe wasondelelana nomntu onecorona ube wena ungenazo iimpawu zeCOVID-19, uya kuqhubeka usebenza, kodwa kufuneke uyigade ngokwakho imeko yakho iintsuku ezilishumi (10). Ukuba uyaqalisa ukubona iimpawu, kufuneka uzikhwarantine uye kuhlolwa xa kukho imfuneko.
Ukuba ubukhe wasondelelana nomntu osulelekileyo, kodwa unxiba imaski ngalo lonke ixesha, ungaqhubeka nokusebenza kwaye kufuneke uzigade iimpawu onazo iintsuku ezilishumi (10).
Ingaba luxanduva luni analo umsebenzi?
Abasebenzi banendima ebalulekileyo ekufuneka bayenze ukunqanda ukunwenwa kweCovid-19, kwaye kufuneka:
Bamazise umqeshi ngoko nangoko xa befunyaniswe benentsholongwane okanye xa bebekhe basondelelana nomntu onayo.
Bazame kangangoko ukuba basoloko behamba ngesithuthi esinye, basebenze kwindawo enye okanye neqela labasebenzi elinye bathathe ibreyikhi ngaxesha linye noogxa babo begcine umgama omiselweyo. Oku kunceda ukunciphisa ukunwenwa kwesi sifo kwenze kube lula kananjalo kumqeshi namagosa ezempilo ukubona ukuba ngabaphi abasebenzi abathe bosuleleka, besosuleleka phi yiCovid-19.
Mazise umqeshi wakho xa ugula ungazubakho emsebenzini kuba ugula.
Zibone unoxanduva ngempilo yakho:
ngokugcina umgama oyi 1,5 yeemitha phakathi kwakho nabanye ngawo onke amaxesha.
Yenza konke oku kungasentla nakwindawo osebenza kuyo nakwiindawo oba kunye nabanye ngexesha lebreyikhi, ezifana neenkanti neendawo ekutshayelwa kuzo.
Ndisebenza kwezolimo - ndingalufumana phi olunye ulwazi malunga nokusebenza ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ngezinye iinkcukacha malunga negalelo/iziphumo zemimiselo yeAlert Level kwezoLimo nakwiinkqubo zezoLimo ngena ku: www.elsenburg.com